Public Health Concern अध्ययन भन्छ : बिसिजी खोप अनिबार्य गरिएका मुलुकमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदरमा कमि ! – Public Health Concern
अध्ययन भन्छ : बिसिजी खोप अनिबार्य गरिएका मुलुकमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदरमा कमि !
क्षयरोगको खोप अनिवार्य गरिएका मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि तुलनात्मक रुपमा कम रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्रकाशित नभएका मेडिकल रिसर्चको साइट मेडआरएक्सआईभीका अनुसार क्षयरोगका लागि बीसीजी खोप दिइने मुलुकमा कोभिड-१९ का संक्रमित र मृतकको संख्या पनि कम देखिएको हो ।
द साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका अनुसार, अहिले यो परीक्षण केवल छ मुलुकमा मात्र गरिएको छ । तर, छ मुलुकमा गरिएको यो अनुसन्धानले पनि महत्वपूर्ण नतिजा भने दिएको छ । यी मुलुकमा बीसीजी खोप दिएका स्वास्थ्यकर्मी र वृद्ध मानिसमा पनि कोभिड-१९ विरुद्धको प्रतिरक्षा प्रणाली एकै किसिमको पाइएको थियो ।
साथै जापानले अन्य मुलुकले जस्तो लकडाउनलगायतका निर्णय पनि गरेको छैन । जापानमा वृद्ध मानिसहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ । कोभिड-१९ को असर धेरै वृद्ध मानिसमा हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
अमेरिका र इटालीजस्ता उच्च आम्दानी भएका मुलुकहरुमा अहिले धेरै कोभिड-१९ का बिरामी देखिएका छन् । यी मुलुकमा बीसीजीको खोप जोखिममा रहेका मानिसलाई मात्र अनिवार्य गरिएको छ ।
दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता बीसीजी खोप अनिवार्य भएका मुलुक अहिले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सफल देखिएका छन् । कम आम्दानी भएका मुलुकको तथ्यांक भने यस किसिमको अनुसन्धानको लागि त्यति विश्वसनीय मानिँदैन ।
अहिले यो भाइरसका कारण संक्रमितको संख्या १० लाख नाघिसकेको छ भने अहिलेसम्म यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५० हजार नाघिसकेको छ ।
यस्तोमा विश्वभरका मुलुकहरु यो भाइरसबाट पार पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । कुनै पनि रोगको खोप एक वर्षभन्दा अगाडि उपलब्ध हुन निकै कठिन हुन्छ । यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्डको कारण यो समय निकै कम हुन जान्छ ।
यो कारणले पनि बीसीजी खोपले कोभिड-१९ रोक्न सक्छ कि भनेर हेर्नु तर्क संगत हुने युनिभर्सिटी अफ टोरोन्टोका इलोनोर फिस बताउँछन्। ओटोजुको अनुसन्धानलाई पुनरावलोकनको काम भइरहेको छ । फिसले आफूले यो नतिजा निकै ध्यान दिएर हेरेको बताए ।
ओटाजुले यसअघि नै विशेषज्ञबाट यो अध्ययनबाट विभिन्न प्रतिक्रिया पाएका छन् । उनीहरुको आशंका समाधानको लागि उनी अहिले उक्त अध्ययनको दोस्रो भागमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
ओटाजु भन्छन्, ‘बीसीजी खोपको कारण मात्र कोभिड-१९ लाई नियन्त्रण गर्नसक्ने कुनै मुलुक छैनन् ।’ कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि सामाजिक दुरी बढाउने, परीक्षण बढाउने र संक्रमितहरुलाई आइसोलेसनमा राख्नु जरुरी हुन्छ ।अनलाइन खबर